Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na a họpụtara mmanụ hydraulic nke ike hydraulic na - ekwesịghị ekwesị
Anyị niile maara na ike nke hydraulic bụ nke ya na ahụ mmadụ, yana mmanụ hydraulic pụrụ iche maka igwe haịdrọlik nwere ike ịdị ka ọbara mmadụ. Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọbara, ọ ga-eweta ọtụtụ ọnọdụ. Taa Huai'an P ...
A na-eji ike hydraulic (HPU) eme ihe dị ka ngwaọrụ mmanụ, nke jikọtara ya na ọtụtụ hydraulic cylinders site na usoro pipeline dị n'èzí iji chịkwaa omume nke ọtụtụ ụdị nke valves. The mmanụ ụgbọala tank, mmanụ ụgbọala mgbapụta na-akwado ume ike ngwaọrụ na-etolite otu nọọrọ onwe ha mechiri emechi ike mmanụ isi syst ...
Ihe kpatara ịma jijiji na mkpọtụ nke sistemụ hydraulic na usoro mkpochapụ ha
E nwere ọtụtụ isi mmalite nke mkpọtụ na mkpọtụ na sistemụ hydraulic, gụnyere sistemụ arụmọrụ, nfuli mmiri, hydraulic valves na pipelines. Omume ọma na mkpọtụ nke sistemụ igwe Ihe na - akpata mkpọtụ na mkpọtụ nke sistemu igwe na - ebutekarị site na sistemu nnyefe syst ...